Qaxootiga Restad Gård oo guryaha laga saarayo todobaadka dambe - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Xeerada qaxootiga Restad Gård ee magaalada Vänersborg Foto:Mona Ismail Jama/SR
"Ma laaban karno"
La daabacay fredag 27 maj 2016 kl 11.57
Kowda bisha juun sannadkan ayaa dadka diidmada helay laga jaraya lacagaha ay ka helaan heeyada socdaalka ee migrationsverket, waxaa laga saaraya qolalkooda islamarkaas na laga qaadaya kadhadhka aqoonsiga ee qaxootiga la siiyo, LMA kort. Waa sida uu sharciga cusub ay dawladdu soo dejisay sheegayo.
Restad Gård, waa xeerada qaxootiga ugu weyn ee waddanka. Halkaas oo ay ugu yaraan 1200 qaxooti lugu meeleyay. Todobaadkan waxaan booqanay magaalada Vänersborg iyo qaxootiga halkaas ku sugan.Dhowaan ayaa dadka halkan ku nool guryahooda laga saaraya, sababta oo ah in aaney heeyada socdaalku haysanin meel ay ku meeleeyso qaxootiga sharciga sugaya, sidaas daraadeed ayaa la doonaya in dadka diidmada helay laga saaro guryahan dabeetana dibada la dhigo.
Ugu yaraan tobaneeyo ka mid ah qaxootigan ayuu sharcigan cusubi sameeynaya. Kuwan ayaan haysanin meel ay qabtaan.
Sharciga cusb ayaa si xun u saameeynaya qaar ka mid ah dadka aan ku booqday xeeradan. Axmed Cabdalla ayaa Iswiidhan ku noola muddo laba sanno ah. Soomaaliya wuxuu uga soo tagay ururka argagaxisada ee Al- shabaab oo sidu isagu u sheegay u hanjabay.
Badanka dadka halkan degan ayaa u jeeda in ay 1 bisha juun ka bixi doonin qorfadahooda, madama ay haysanin meel ay qabtaan. Hasayeeshe ayuu sheegay Sverker Spaak oo heeyada socdaalka ka hawlgala in dadka diida in ay qorfadahooda ka baxaan kowda bisha khasab lagaga saari doono, heeyada deymaha khasabka ku soo celisa, kronofogden iyo booliska ayaa hawshaas iska leh, ayuu sheegay.
Labada duhurnimo maanta ayaa banaanbax ku saabsan sharcigan cusub laga qabanaya magaalada Vänersborg. Halkaas ayey ka soo qeeyb galayaan dadka diidmada helay ee uu sharcigan cusubi saameeynayo. Cabdullahi Macalin oo ka tirsan xisbiga miljöpartiet ayaa ah shakhsiga soo qabanqaabiyay banaanbaxan.